Esory ny boribory maizina sy ny tasy amin'ny hoditra amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Esory ireo faribolana mainty sy tasy amin'ny hoditra Photoshop haingana sy mora mahazoa izany hoditra tonga lafatra izany ohatrinona no tadiavinao. Amboary ireo sary misy anao ireo faribolana maizina vorondolo matory kely ny alina talohan'izay, esory io pimple kely io Mahatalanjona ny sary nahazoana diplaoma. Ny karazana bibikely rehetra dia mety misy manitsy haingana dia haingana.
Photoshop dia wand majika afaka manatsara ny mpandidy plastika tsara indrindra amin'ny alàlan'ny a madio tsara hoditra silky tsy misy kilema. Discover ny tsiambaratelon'ny magazine lamaody ary ny fianarana doka hanitsiana ny hoditry ny sarinao rehetra. Hatsarao ny fakanao sary amin'ny alàlan'ny fahazoana manadio ny hoditra modely miaraka amin'ity fitaovana famerenana sary mahavariana ity.
Conseguir azo atao ny hoditra tonga lafatra misaotra ny majika an'ny Photoshop ary amin'ireo fitaovana isan-karazany ho an'ny famerenana amin'ny laoniny niomerika. Fitaovana roa ihany no ho tratrarintsika diovy tsara ny hoditra ny sarinay nahitana vokatra tena matihanina.
Ao amin'io lahatsoratra hampiasa ity manaraka ity izahay fitaovana de Photoshop:
Fitaovana Clone Stamp
Hianarantsika izany ireto hevitra manaraka ireto:
Esory ny faribolana mainty
Esory ny tasy
Ny zavatra voalohany tokony hanombohantsika miasa dia ny fananana sary iray izay misy karazana lesoka hita eo amin'ny hoditra, ny tena mety dia ny manomboka miasa amin'ny fanesorana ireo faribolana maizina.
1 Esory ny faribolana maizina amin'ny Photoshop
2 Fitaovana Clone Stamp
3 Fitaovana fonosana
Esory ny boribory maizina amin'ny Photoshop
Esory ny boribory maizina amin'ny Photoshop zavatra mora be izany noho ny fitaovana buffer clone, ao anatin'ny minitra vitsy monja dia azonao atao ny manafoana ireo faribolana maizina miaraka amin'ny vitsivitsy valiny tena misy. Ny faribolana maizina dia tsy inona fa faritra maizina amin'ny hoditra eo ambanin'ny maso fotsiny, io dia ahitsin'ny faritra fakana tahaka tsy voakasik'izany olana izany araka ny ho hitantsika etsy ambany.
Misafidy ny fitaovana buffer clone hita ao amin'ny menio ankavanan'ny Photoshop.
Aorian'ny fisafidianana ny fitaovana buffer clone izay tokony hataontsika dia mampihena ny hamafin'ny farafahakeliny, la opacity sy mikoriana hampidininay kely izy ireo. Ny hevitra an'ity karazana retouch ity dia ny hahatratra ahitsy tsikelikely ny hoditra hahatonga azy io ho fanovana misimisy kokoa sy matihanina kokoa.
Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manomboka esory ny boribory maizina amin'ny sary, noho izany dia manakaiky ny faritra izay hikasantsika izy ary isika mandika faritra akaikin'ny faribolana maizina. Mba handika faritra iray miaraka amin'ny fitaovana buffer clone tokony hataontsika tsindrio ny bokotra alt ary kitiho miaraka amin'ny totozy, ho azy Photoshop handika izany faritra an-tsary izany isaky ny manindry ny totozy isika. Ny tetika hahazoana fifandraisana tsara dia kopia faritra tena akaiky ny hoditra voadona manandrana manaparitaka ny lokon'ny hoditra araka izay tratra.
Ireo teboka mavo dia maneho ireo faritra azontsika adika apetaka ao amin'ilay faritra misy ny tsipika mavo, tsikelikely dia manadio ireo faribolana maizina isika miaraka amin'ny santionan'ny hoditra samihafa.
Raha ankoatry ny fanafoanana ireo faribolana maizina dia tadiavinay esory ny pimples kely, ny holatra, ny moles na ny kilema amin'ny karazany rehetra azontsika ampiasaina ny fitaovana patch. Ity fitaovana ity dia ahafahantsika misafidy tasy ary esory haingana.
Ilay patch patch dia tena mora ampiasaina ny sisa ataontsika dia mifidy faritra misy tasy izahay dia te-hanafoana ary hisintona azy io amin'ny ampahany amin'ny hoditra manaraka izay tsy misy loto.
Hamarino tsara fa nifantina ny Safidy loharano ao anatin'ilay fitaovana patch mba hanitsiana ny lesoka ary tsy hanaovantsika azy io, raha misafidy safidy hafa ho azontsika isika dika mitovy dika amin'ny hoditra.
Ny fitaovana patch miasa toy ny fitaovana fifantina rehetra, ny hany mila ataontsika dia ny mamorona a fisafidianana ny faritra tianay hasiana tanana.
Makà hoditra magazine tonga lafatra azo atao izany noho i Photoshop fitantanana ny fanilihana ny fandidiana plastika sy ny makiazy. Afaka minitra vitsivitsy monja amin'ny fanitsiana amboary ireo sary rehetra ireo fa na dia lavorary aza izy ireo dia afaka mahita lesoka kely izay tianay hatsaraina.
Tsy tokony hohadinointsika fa amin'ny teboka, pimples, maratra, boribory mainty na karazana lesoka rehetra amin'ny hoditra dia tonga lafatra ihany isika :) Mirary soa miaraka amin'ireo fandidiana nomerika rehetra amin'ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Esory ireo boribory maizina sy teboka eo amin'ny hoditra amin'ny Photoshop
Carmen trujillo dia hoy izy:
Ary aiza no lazain'izy ireo fa novidiana crème ???
Valiny tamin'i Carmen Trujillo
Famoronana an-tserasera dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao ao Mercadona mbola tsy hitantsika izany! hahaha mila mampiasa Photoshop isika ...
Valio ny Creativos Online